आज मंगलबार गणेश भगवानको पूजा आराधना गर्नाले घरमा सुख शान्ति प्राप्त हुनेछ - NepalKhoj
नेपालखोज २०७७ फागुन ११ गते ५:००
गणेशजीलाई लड्डु औधी मनपर्छ । यसबारे पद्यपुराणमा उल्लेख गरिएको कथा यसप्रकार छः
भगवान गणेश सबै शक्तिका श्रोत पनि हुनुहुन्छ । हुनत हाम्रा सबै देवीदेवताहरुमा दातापन छ तर गणेशजी मङ्गलदाता हुनुहुन्छ । गणेशजी हाम्रो सोच , चिन्तन , धारणा र व्यवहारमा यसकारण पूजनीय छ कि उहाँ गुणहरुको खानी हुनुहुन्छ । उहाँमा सबै गुण र शक्तिहरु शोभायमान छ । उहाँ देवताहरुमध्ये गुणको देवता हुनुहुन्छ ।
नागाबाबालाई मङ्गलबारदेखि शुक्रबारसम्म निवस्त्र रहने अनुमति
शिव स्वरुपको अर्थ के हो ?
सूर्य भगवानको पूजा कसरी गर्ने ? विधि पनि सिक्नुहोस्